बाँकेमा होमस्टे बढ्दै – Mission
बाँकेमा होमस्टे बढ्दै
कोहलपुर, ५ फागुन / बाँकेको पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा परिचित गाभर भ्यालीमा करिब ४÷५ वर्षअघि सामुदायिक होमस्टेको सुरुवात भयो । त्यसलगत्तै ढकेरीमा नयाँगाउँ होमस्टे संचालनमा आयो । खड्कवारमा पनि नयाँ होमस्टे संचालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ । बाँकेमा अहिले होमस्टेको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएको छ । बाँकेका होमस्टेहरु बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जलाई लक्षित गरेर स्थापना गरिएका छन् ।
मंगलबार चिसापानी ९ गाभरमा नमुना थारु गाउँ होमस्टे संचालनमा आयो । जहाँ थारु संस्कृतिका साथै विभिन्न थारु परिकारका स्वाद चाख्न पाइन्छ । साथै अष्ट्रिज फर्मको अवलोकन पनि गर्न पाइन्छ ।
सो होमस्टे उद्घाटन भएको भोलिपल्टै बुधबार गाभर भ्यालीमा घर नं. ६ संचालनमा आएको छ । बाँके क्षेत्र नं. ४ का सांसद दल बहादुर सुनार र चिसापानी पर्यटन प्रवद्र्धन विकास समिति अध्यक्ष भीम केसीले संयुक्त रुपमा होमस्टेको उद्घाटन गरेका हुन् ।
होमस्टेको उद्घाटन गर्दै सुनारले होमस्टेले पर्यटन प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताएका छन् । उनले होमस्टेले स्थानीयलाई रोजगार दिन सफल पनि भएको बताए । सुनारले आउने सांसद विकास कोषको बजेटबाट गाभर होमस्टेलाई पर्यटकीय क्षेत्रको हबको रुपमा विकास गर्नका लागि पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । सुनारले गाभर भ्याली जाने बाटो कालोपत्रे गर्ने, खानेपानी ट्याङ्की निर्माण, स्विमिङग पुल निर्माण तथा विद्युतको समस्यालाई समाधान गरिने बताए ।
गाभर भ्याली सामुदायिक होमस्टेका अध्यक्ष कृष्ण चौधरीले होमस्टे क्षेत्रमा खानेपानी, बाटो तथा विद्युतको समस्याहरु रहेको बताए ।
विशेषगरी थारु तथा मुगाली संस्कृतीलाई संरक्षण गर्दै होमस्टे सञ्चालन भएका छन् । होमस्टेमा थारु संङ्ग्राहलय, बााँके राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र, अष्ट्रिज फर्म तथा थारु बस्ती अवलोकन गर्ने, पिकनिक स्पट जस्ता थुप्रै रमणिय स्थल गाभर भ्यालीमा रहेका
होमस्टे उदघाटन कार्यक्रममा पर्यटन कार्यालय बाँकेका प्रमुख दिपक बुढाथोकी, चिसापानी क्षेत्र पर्यटन प्रवद्र्धन क्षेत्रका अध्यक्ष भिम केसी लगायत विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि, पत्रकार लगायत स्थानियको सहभागीता रहेको थियो ।
प्रकाशित मितिः बिहिबार, फाल्गुन ५, २०७३ 11:54:17 AM |
Prevमसला प्रशोधन केन्द्र स्थापना हुने
Nextप्रधानाध्यापक र शिक्षकलाई प्रशिक्षण